LACAG LA BIXIDA
Local Wire-ka Ah
Xawilaada Lacagta Bangiga
***Shuruuddaha “Xogta Dheeraad ah” ka eeg qaybta hoose.
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF 100$ Waxaa Daboolaysa Fxprimus*** 2 -5 CISHO OO MAALMAHA LA SHAQEEYO AH*** DHIGAAL
Xawilaada Local Wire-ka Ah
* Akoonada bangiga waa in ay hayaan lacagaha maxaliga ee lasoo sheegay.
** Xawilaadaha bangiga maxalliga ah waxaa la fuliyaa wakhtiga hore loo sheegay ee taariikhda codsiga lasoo dhigay. Ogsoonow in kusoo dirista lacagaha bangiga ay qaadato hal maalin oo ah maalmaha la shaqeeyo.
MYR, IDR, VND, THB 100$ Waxaa Daboolaysa Fxprimus*** DHIGAALKA 24-KA SAACADOOD AH**
* Kaararka laga bixiyo meel ka baxsan mareykanka ayaa la aqbali doona.
* Lacag bixinada laga sameeyo credit card waxaa la fuliyaa 24 saacadood gudahood kadib codsiga la bixista. Xasuusin: lacagaha dib loogu soo celinayo akoonka bangigaaga waxay qaadatayaa 4-8 oo maalmaha la shaqeeyo ah.
**La bixitaanada lacagta/dib celinta lacagaha ee credit cards kama badnaan karo lacagta dhigaalka oo bilowga ah ama isugeynta dhamaan lacagaha dhigaalka ee credit card-ka. Hadii xadiga lacagta aad la baxaysaa ay ka badan tahay dhigaalkagi bilawga ahaa ama isugeynta dhamaan dhigaaladaada, waxaad helaysaa inta kuuso hadha, adoo isticmaalaya hababka lagula baxo ee laga helayo members area. Waxaad la xiriiri kartaa ka [email protected] si aad ugu jawaabo dheerada su’aalaha ku saabsan lacag la bixidaada.
USD, EUR, SGD, GBP, PLN, HUF 100$ Waxaa Daboolaysa Fxprimus*** Ilaa Dhigaalka 24-ka Saacadood
USD, EUR, GBP, PLN, HUF 100$ Waxaa Daboolaysa Fxprimus*** Ilaa Dhigaalka 24-ka Saacadood
EUR 100$ Waxaa Daboolaysa Fxprimus*** Ilaa Dhigaalka 24-ka Saacadood
USD, IDR 100$ Waxaa Daboolaysa Fxprimus*** Ilaa Dhigaalka 24-ka Saacadood
CNY 100$ Waxaa Daboolaysa Fxprimus*** Ilaa Dhigaalka 24-ka Saacadood
USD, EUR 100$ Waxaa Daboolaysa Fxprimus*** Ilaa Dhigaalka 24-ka Saacadood
Mudnaansiinta lacag la bixida:
Dhamaan akoonada; Shakhsiyeed, Shirkad ama Akoon Shuraako, FXPRIMUS waxay dib ugu celisaa/ama lagula baxaa lacagaha halkii asalka ahayd ee laga sameeyey dhigaalka iyadoo eegayo Jadwalkan Mudnaanta Lacag Bixinta ee Hoose:
1. Lacag la bixida kaararka Credit/Debit Credit Card-ka ayaa ah habka ugu horeeya lacag celinta lagu sameeyo, lacagta dhigaalka oo dhameystiran
2. Lacag kula Bixida E-wallet iyo Bitpay Bitpay dabadeed E-wallet lacagcelinta/la bixida ayaa lagu samaynayaa marka dhamaan kaararka Credit/Debit dhigaaladooda oo dhameystiran dib loogu celiyo.
3. Bank wire ama/iyo FXPRIMUS MasterCard ayaa la isticmaali doonaa marka dhigaalada lagu sameeyo hababka kor ku xusan la wada isticmaalo. Marka dhamaan dib loogu celiyo asalkoodi, lacag bixitaanka ayaa la samaynayaa iyadoo la isticmaalayo hababka lagula baxo FXPRIMUS ee goobta xubnaha (members area) Xusuusnow in la bixitaannada loo isticmaali karo hab lamid ah oo ay isku magac yihiin akoon(ada) haystaha FXPRIMUS.
1. Dhamaan la bixitaanada waxa la socodsiiya 24-48 saacadood, saacadaha maalmaha shaqada oo ah Isniinta Ilaa Jimcaha 7da subaxnimo ilaa 9-ka habeenimo waqtiga GMT+2 bishiiba. kala xiriir team-ka lacag la bixinta wixii macluumaad ee dheerada [email protected] wixii
2. Lacag la bixida ugu yar ee ugu macquulsan, macaamiisha rajaynaysa inay la baxaan wax ka hooseeya heerki loogu talogalay waxaa looga baahan doona inay daboolaan dhamaan kharashyada la socda codsiga la bixitaanka.
3. FXPRIMUS waxay mudnaan kala siiisa Lacagbixinta/lacag celinta iyadoo loo eegayo asalka dhigaalka, marka dhamaan lacag celinta la dhamaystiro, xor ayaad ugu taahay inaad kula baxdo lacagahaaga hababka laga helayo goobta xubnaha. hadii aad qabtid wax su’aalo la xidhiidha lacagtaada, fadlan kala xiriir team-kayaga, [email protected]
4. Marka la socodsiiyo hawsha la bixidaada (oo qaadanaysa wakhtiga hore loo sheegay) waa inaad filataa in lacagtaada lagu soo shubo e-wallet-ka.
5. Habab kala duwan oo lacagta lagula baxo (wadankiiba) ayaa laga helayaa goobta xubnaha. Hadii ay suurogal noqon waydo hab lacag lagula baxo ama lagu celiyo , waxaa la isticmaali doona oo keliya Wire Transfer
6. Lacala hadii FXPRIMUS ay ka shakido in lagu xadgudbay siyaasada dhigaalka iyo la bixida lacagta (hadii ujeedka loogu shubay akoonka lacagta aan loogu talogalin in lagu ganacsado ama macaamilku uu u ganacsanayo meel ka hooseysa heerka ganacsi taaso si wakhti ah ay u kormeerto FXPRIMUS), FXPRIMUS iyadaa xaq u leh sheegashada dib u eegista fee kasta in aanu u gudbin macaamiisha ilaa waqtigaas.
7. Shirkaddu ma qaadi doonto wax masuuliyad ah iyadoon la eegayn xaaladaha lacag bixinnadan guuldarastay, khasaare kasta oo ka dhaca, ama yimaada mustaqbalka ee la xidhiidha isticmaalka adeegyada kor ku xusan.
* Fadlan ogsoonow in bangigaagu uu isticmaali doono bangiyo kale si uu ugu soo xawilo lacagtaada bangiga FXPRIMUS’s. tani markay dhacdo bangi kasta oo xidhiidhiyaha ahi wuxuu qaada fee u gaar ah. FXPRIMUS ma bixiso fee-ga bangiyadaada. FXPRIMUS waxay dabooshaa oo keliya lacagaha ama fee-GA bangiyadooda, mana aha ta macmiilka, sida hore loo sheegay. Fadlan la xiriir bangigaaga si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan lacagta fee-ga ah ee la raacin doono dhigaalkaaga iyo la bixida marka Wire Transfer uu jiro .
** Fadlan ogsoonow in lacagbixinada la socodsiiyo saacadaha shaqada ee maalinta oo ah 5 cisho usbuucii, codsi kasta oo la sameeyo dhamaadka usbuuca waxaa la socodsiin doona maalinta shaqada ee ku xigta.